Apple Music 1 rave iro zita repamutemo reBeats 1 radio | Ndinobva mac
Apple Music 1 rave iro zita repamutemo reBeats 1 radio
Chiteshi cheredhiyo cheBeats 1 chinoshandura zita rayo mushure memakore mashanu ekuvapo. Mune ino kesi uye sezvaunogona kuverenga mumusoro weiyi nhau, Apple inosarudza kudaidza Beats 1: Apple Music 1. Chokwadi ndechekuti Apple haimanikidzi hupenyu zvakanyanya nekuisa mazita uye mune iyi nyaya ivo vakangowedzera iyo "1" iyo Beats 1 yatove nayo.
Zvese izvi nekuda kwekuuya kwepamutemo kwezviteshi zviviri zvitsva: Apple Music Hits uye Apple Music Nyika. Mupfungwa iyi, isu tinofanirwa kuratidza kuyedza kwekambani yeCupertino yekutsvaga maDJ akanakisa eiyo online radio sevhisi uye muApple Music Hits ivo vachange vari: Jayde Donovan, Estelle, Lowkey, Jenn Marino, Sabi, Nicole Sky, Natalie Sky, George Stroumboulopoulos uye pane dzimwe nguva, Ari Melber.
Panzvimbo iyoyo yeApple Music Nyika avo vanoona nezvekuisa nziyo vachange vari: Kelleigh Bannen, Ty Bentli, Bree, Alecia Davis, Ward Guenther, Nada naTiera. Ashley Eicher naKelly McCartney vakachengeterwa zviitiko zvakakosha.
Chokwadi ndechekuti munyika medu iyi yemahara sevhisi haisi kubudirira kwazvo kune wese munhu, kunyangwe chiri chokwadi kuti payakaburitswa muna 2015 zvaitaridza kuti kuve neredhiyo paApple Music kungave kubudirira chaiko. MuUnited States, bheji inoramba ichisimba uye sezvatinogona kuona zvirongwa zvichiramba zvichiwedzera. Aya maredhiyo matsva anogona kunzwika zvakananga kubva kune chero Mac kana Apple chishandiso, zvakananga kubva kune yakagadziridzwa Apple Music webhu, kana kubva kuchikumbiro chemidziyo yeApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple Music 1 rave iro zita repamutemo reBeats 1 radio
Chirongwa chakavanzika nezve iPod yakagadzirwa neApple kuhurumende yeUS chinobuda
Apple TV + iri kutoshanda pamakwikwi ayo ekutanga emumhanzi tarenda "Rudzi Rwangu Rwenyika"